इन्टरनेटमा अर्को झुट : नेपालीले जित्यो अमेरिकाको पावरबल चिट्ठा – MySansar
यो खबरलाई ऋषि धमलाको नामबाट सेयर गरेको देखाइएको छ। तर यो पेज ऋषि धमलाको भने होइन। ऋषि धमलाको फेसबुकबाट फोटो निकालेर पेजमा हालेको जस्तो देखिएको छ। ऋषि धमलाको वास्तविक फेसबुक अकाउन्ट यो हो।
nepalnewsexp.com नामको वेबसाइट सञ्चालकले आफ्नो भिजिटर बढाउन ऋषिको नाम र गलत समाचारको उपयोग गरेका हुन्।
किन गरिन्छ यस्तो?
आखिर यी डिजिटल फटाहाहरु किन यस्तो गर्छन् त? यसको कारण हो यिनीहरु डिजिटल खेती गर्छन्। फेसबुकमा डलर तिरी विज्ञापन गरी अबोध प्रयोगकर्ताहरुमाझ चारो छर्छन्। जब उनीहरुले क्लिक गरी पेजमा आउँछन्, तब त्यहाँ झुक्याउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन्छ-
ध्यान दिएर हेर्नुस्, यसमा पूरा जानकारीको लागि माथिको भिडियो हेर्नुस् भनिएको छ, तर त्यहाँ भिडियो छँदै छैन। भिडियोको भ्रम दिलाउन भिडियोको फोटो राखिएको छ र त्यसको बीचमा गुगलको एड राखिएको छ। त्यो विज्ञापनमा क्लिक गरेपछि यी चारो छर्नेहरुको दाना जुट्छ। क्लिकपिच्छे रकम बढ्ने हुनाले क्लिक कै लागि उनीहरुले सोझा प्रयोगकर्तालाई झुक्याउन यस्तो दाउ रच्ने गरेका हुन्।
ऋषि धमलालाई समेत फँसाउन खोज्ने यी ब्लग सञ्चालकले ब्लगस्पटमा दुई वटा ब्लग खोलेका रहेछन्। यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस्
यो फटाहा साइटका सञ्चालकको बारेमा खोजी जारी छ। झुटो खबर लेखी जनता झुक्याउने अरु बारे पनि खोजी हामी जारी राख्नेछौँ।
4 thoughts on “इन्टरनेटमा अर्को झुट : नेपालीले जित्यो अमेरिकाको पावरबल चिट्ठा”
फुन नम्बर नि रै’छ, फुनै गरेर बुढाको निन्द्रा खराब गरे नि भैगो, फुनैमा बुढाको सात्तो लिए नि भयो …. कारबाही ता कल्ले पो गर्ला र?
https://who.is/whois/nepalnewsexp.com बाट हेर्दा Krishna Baral को नाम मा register भएको रैछ त्यो डोमेन. बुदा अमेरिका तिर बस्दा रैचन अनि हिउ परेको ले काम मा जान पाएनन् होला अनि अरु लै मुर्गा बनायारे पैसा कमौना लागे | साचो पत्रकरिकता को बेला नै छैन आजकल. facebook को भर मा पत्रकार भएका छन्
Registrant Name: Krishna Baral
Registrant Street: 1210-4010 Lawrence Ave East
Registrant Postal Code: M1E 2R4
Registrant Phone: +1.4162876339
Admin Name: Krishna Baral
Admin Street: 1210-4010 Lawrence Ave East
Admin Postal Code: M1E 2R4
Admin Phone: +1.4162876339
ल न please यस्ता फटाहालाई जसरी हो कारबाही गराउन पर्‍यो सार्है disturb गरेका छन् ।